Iinzuzo Of Kuxhaswe Imiqondiso Solar Railroad Crossing And Road Signs | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uhambo loLoliwe > Iinzuzo Of Kuxhaswe Imiqondiso Solar Railroad Crossing And Road Signs
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 31/03/2020)
Le ikhula phambili, enyameke okunye Indawo intle iye yavusa ezininzi, kwaye kwatshintsha amaphulo eluhlaza jikelele, kwizixeko ezinkulu nakwiidolophu ezincinane ngokufanayo. Omnye imiqondiso emininzi oku ukusetyenziswa ukwanda lwamandla ombane kubomi bemihla ngemihla babantu kunye nomsebenzi kwiinkalo ukuba akuzange kwenziwe ingqalelo ukhetho phambi. Enye indawo okunjalo ukhuseleko ezindleleni, apho isetyenziswa kwinto yonke ukususela iimpawu zendlela eya iirobhothi neenkqubo siphawula, ngaloo ndlela izenza iimeko indlela ebonakalayo ngakumbi kwindawo ngexabiso elisezantsi, kwaye kwakhona ukonga zombini imali kunye neplanethi esebenza.
Ngoxa imiqondiso endleleni ekungekho mfuneko ibengezela ukuba benze umsebenzi wabo, ngokuqinisekileyo Lights babe inzuzo yokwenza abaqhubi bazi ngaphezulu. Iimpawu zendlela Solar-piston exhotyiswe izibane LED ukunika indlela ukubonakala ngcono, omabini ngexesha lasemini nasebusuku (Uyakwazi ukufumana ngaphandle okuninzi malunga ngemigaqo yabo yokusebenza Apha) Ukuba kubonelelwe ngeendidi elungileyo operative naxa iimeko kwimozulu embi leyo ngokuqhelekileyo ukudala iimeko ingozi-ekuthanda. Kungakhathaliseki endaweni yawo - ezijika, mgwaqo okanye kaloliwe yokunqumla, le miqondiso iqinisekisa ukhuseleko olukhulu kubahamba ngeenyawo kunye nezithuthi ngokufanayo.
Izinto eziluncedo Main Of Road Signs Solar-Ixhaswe
Inzuzo enkulu ukugqithisela le miqondiso yinto yokuba amandla ukuba uyazondla aluphumi kutshiswa amafutha eziphili zamandulo ezaba lilitye. Akunamsebenzi ningalihlambeli ngendlela amalahle, namafutha, ne do negesi, leyo eyenza kube 100 ekhulwini indalo-friendly. Imeko kuphela iiyure sunny ngokwaneleyo ukwenzela ukuba kwelanga ukuvunwa, waguquka agcinwe ukusetyenziswa ngonyaka-elide. Njengoko olukhohlisayo le yimfuneko ukuze kubonakale, kanye icala, ufakelo ngokoqoqosho ngokwenene ngenxa uvakalelo yayo kwintshukumo, leyo yenza izithuba efana oku ukusebenza kuphela xa kukho izithuthi benene endleleni, kunokuba ubusuku nemini. isebenzisa amandla Solar kukho ezininzi nezinomtsalane ngokwenene, Abo?
Ngenxa yokuba ezi nofakelo nzima ngoyaba, ukuba kuphuhle ulwazi yabaqhubi nabahambi ngeenyawo ku roundabouts, zokupaka, iindawo eziyingozi ezaziwa ukuba isizathu iingozi, etc. Into yokuba akukho mfuneko ke kwiingcingo okanye umthombo wombane ekufutshane ukusebenza yenza kube lula ukuzihambisa naphi na, ngaphandle kwinyaniso yokuba zezona ngokwenene ixabiso eliphantsi kunye esezantsi nokugcinwa. Inzuzo engaphezulu kukuba ke ngoko kulula ukufaka - zingakotshwa iqhotyoshelwe nokuba kwizithuba ezisisigxina okanye elinye eziphathwayo ukuba ukuhamba enkulu. Oku kwenza ukuba mkhulu phakathi umgwaqo, njengoko angabekwa, ufuduswe kuphantse ukuba akukho xesha ngaphandle ebangela ukuphazamiseka zokuhamba ezikufutshane.
Imiqondiso Railroad Solar
Imiqondiso zikaloliwe awela sisebenzise amandla kwelanga anokusetyenziswa omabini imimandla mveliso kunye neendawo ezisemaphandleni. Products lo hlobo, njenge https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ fumana oololiwe abasondelayo ngenxa yeentambo zentsimbi ezingenazingcingo, kwaye emva kokuba bafumane uphawu, ukuba isebenze izibane yokuwela kunye nesandi ezihamba kude uloliwe sele udlule kwaye kukhuselekile ukuba bawele ingaoma. La maza akholisa ukuba ngababini kwicala ngalinye yokuwela kaloliwe, nekhonkco wireless sokuyivula ukucima ngaxeshanye. Mhlawumbi into engcono kokufaka ezo kukuba akukho iibhokisi zangaphandle okanye iingcingo elide.
Inkqubo yonke lixhomekeke kumandla kwelanga kwanele ukuba wokugqibela 10 iiyure zomsebenzi liqhawuke kanye igcwele kodwa ukhuphelo ibhetri, ukuba kukho ukunqongophala olupheleleyo kwelanga xa amandla ukugeleza kuba ndidiniwe. Le nkqubo kwakhona ngamanye amaxesha iyasebenza kuphela ukuba imiqathango ethile ehlelwe kuyahlangatyezwana, ezifana kwisantya ethile, apho uloliwe abasondela ihamba, umzekelo. Oku kungenziwa wamisa nomlilo kuphela i alarm ukuba ixabiso phezu 65 mph futhi unganaki kwezithuthi, kuhamba ngaphezu koko. Iinketho zingafani.
Nangona amandla eluhlaza iye yafakwa ngokupheleleyo phakathi kwakhe umphefumlo waloo mntu avareji kodwa, siyakwazi ukubona ubukho nokusetyenziswa kwayo zokukhula yi ngomzuzu, engena sphere kwaye ngakumbi ebomini. Oku ngokwenene ikamva umhlaba lethu yaye imele ngendlela ngokokusingqongileyo andizincini inkqubela sezingalweni ngaphandle ngakumbi ingamenzakalisanga imali ethe yaye ubuncwane ngokwendalo esele nefuthe kakhulu ngumntu. indlela kunye zikaloliwe izisombululo Solar-piston Basimisela umzekelo omhle ezisebenzayo, izicelo smart kunye engabizi njengobutyebi enkulu yendalo.
Sinomdla kokusingqongileyo kwaye siyayithanda art zohambo. Qala kubhukishelwa uhambo ngololiwe Gcina A Isitimela, namhlanje!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Iinzuzo Of Kuxhaswe Imiqondiso Solar Railroad Crossing And Road Signs” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolar-powered-railroad-crossing-signal%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / pl ukuba / ts okanye / es kwiilwimi ezininzi ozikhethele.
NguyenKong GreenEnergy I-IndustrialEngineering Umoya ovuselelekayo Amandla esola train Travel